Maraoka: Ny Jodaisma ao Maraoka · Global Voices teny Malagasy
Betsaka noho ny ao Maraoka ny Jiosy any Etiopia
Voadika ny 22 Aogositra 2020 15:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, bahasa Indonesia, Ελληνικά, English
Manana tantara lavabe ifandraisany amin'ny Jodaisma i Maraoka; nandritra ny fanitarana ny fanjakana romàna, betsaka ireo Jiosy nipetraka tao amin'ity antsoina ankehitrio hoe Maraoka ity. Arakaraky ny nandehanan'ny fotoana, niova avy any amin'ny tsara no lasa nihahenjana ny fifandraisana nisy tamin'ireo mponina izay miozolmana no betsaka tao Maraoka sy ireo Jiosy vitsy an'isa tao aminy. Taorian'ny fananganana ny Fanjakana Israeliàna, nifindra monina ny ankamaroan'ireo Jiosy tao Maraoka (nanodidina ny 15% tamin'ireo Jiosy Israeliàna raha ny marina dia taranaka Jiosy avy ao Maraoka avokoa); na izany aza, manodidina ny 7.000 eo no Jiosy mbola monina ao Maraoka amin'izao fotoana izao. Matetika ry zareo Maraokàna no maika ery manamarika hoe Jiosy i André Azoulay, mpanolotsaina voalohan'ny mpanjaka.
Zara raha misy zavatra hita ety anaty aterineto momba ireo Jiosy Maraokàna, araka ny fanamarihana vao haingana nataon'ilay Maraokàna bilaogera Ibn Kafka. Ao anaty lahatsoratra iray naverina navoaka tamin'ny bilaogy Jewish Morocco, hoy ny nosoratany:
Vetivety dia kivy izay mitady fanampimbaovao ety anaty aterineto momba ny jodaisma maraokàna: eo anelanelan'ny fitobahan'ireo rohy sy ny kalitao misavoritaka be ihany amin'ny torohay, dia matetika tonga eo ny sorisory. Hatreto, ilay tranonkala mamiratr'i Rick Gold – Visiting Jewish Morocco (fitsidihana ireo Jiosy ao Maraoka) – no lasa teboka iray fiaingàna tsy azo ihodivirana, ary afaka anampiana azy ny sehatra fifampiresahana Dafina, misaritaka, feno saingy tsy mitovy. Afaka anampiana ny lisitra ihany koa ireo tranombakoka roa – ny an'ny jodaisma marokàna ao Casablanca, sy ny an'ny Ivontoeran'ny kolontsaina jiosy sy marokàna ao Bruxelles. Raha tsy hitanisa ireo tranonkala mifandray amin'izany – toy ilay iray natokana ho an'ny fanavaozana ny sinagôga Attias ao Essaouira.
Araka izany dia atolotr'ilay bilaogera ho antsika ny bilaogy iray vao avy nosokafana mihitsy, Jewish Morocco (Ireo Jiosy ao Maraoka), soratan'ilay Amerikàna Chris Silver. Chris Silver, izay mitrandraka ireo toerana jiosy rehetra manerana ny firenena, dia manoratra momba ireo tanandehibe tsy mba voatanisa velively ao anatin'ny “blogoma” (tontolon'ny bilaogy maraokàna). Ao anaty lahatsoratra iray vao haingana, tantarainy ny fihaonany tamin'ireo Jiosy maraokàna tao Oujda [angl] :
Halina, niaraka tamin'ireo olona mahafinaritra nampiantrano ahy aho ary dia norosoana sakafo mafilotra iray hafa. Talohan'ny sakafo hariva, nipetraka teo anilako ny zokiny indrindra tamin'ireo vehivavy ary naniry ny hahafantatra izay rehetra momba ny tontolon'ny Jiosy. Tiany nofantarina ny isan'ireo Jiosy ao Siria, Libanaona, any rehetra any. Nametrahany fanontaniana maro momba ireo Jiosy ao Etiopia aho ary dia gaga mihitsy tamin'ny nanontaniany izany tamiko. Nametrahany fanontaniana momba an'i Iràna aho ary dia nambarako azy fa betsaka noho ny eto Maraoka ny Jiosy any. Taitra daholo izy rehetra ary nanomboka nanontany raha toa ka mandrakotra ny tavany ny vehivavy any, toy ny ataon'ireo vehivavy iraniàna. Tena nampihomehy be.
Nahafantarako zavatra maro momba ireny vehivavy ireny ny fotoana niarahanay nisakafo. Fahiny dia efa tany Israely ny iray tamin'izy ireo, saingy noho ny antony maromaro dia nisafidy ny hijanona eto Maraoka. Nolazaiko azy ireo fa misaotra azy ireo ny reniko noho ny fandraisana mafàna nataon-dry zareo ahy ary dia tena nahafaly azy ireo tokoa izany. Vita ny sakafo harivanay ary dia niangavian-dry zareo aho hitondra holatra 4 livres (2 kg eo ho eo) ho an'ireo namana vitsivitsy iraisana ao Casablanca. Mazava ho azy fa nekeko, ary dia nampiako indray boatina “matzoh” feno holatra ireo entako maivamaivana tany am-boalohany.
Sinagôga Bet El, Casablanca, Maraoka
Nomarihan'i Chris Silver ihany koa fa zara raha misy ireo tranonkala jiosy maraokàna. Manoratra izy ao anaty lahatsoratra iray fa:
Google Earth sy Wikimapia no lasa loharano tena mahaliana entina mamantatra ny tontolon'ny Jiosy ao Maraoka. Ireo fampiasa roa ireo dia ahafahan'ireo mpampiasa azy mamantatra ireo teboka mipetraka eo anaty sarintany iray, izy matetika mazava be. Araka izany, ohatra, ny fijerena avy eny an-danitra an'i Rabat dia hahitana an'i mellah sy sinagôga iray (“sinagôga jiosy ao atsimon'i mellah” anaty taratra misy faritra 3 voamarika) ankoatra ireo toerana marobe hafa. Ilay mpampiasa ihany no manoratra ny torohay, ary raha ny tokony ho izy, dia olona ety ambonin'ny tany.
Mivandravandra be fa miezaka manao izay azon'izy ireo atao ireto bilaogera roa ireto mba hamerenana io vahoaka tsy dia misy mahalàla io ho hita anaty aterineto. Ibn Kafka, anefa, mizara alahelo iray :
…hoe tsy misy feo avy ao anatiny tsy an'ny andrimpanjakana – ohatra, bilaogy iray soratana Maraokàna jiosy iray monina ao Maraoka, manazava avy ao anatiny ny kolontsaina, ny tantara, ny ara-panahy ary ny ankehitriny amin'io ampahany fototra amin'ny vahoaka sy ny tantara maraokàna io.
Sary natolotr'i: dlisbona